ဖာဂူဆနျရဲ့ မနျယူနညျးပွဘဝတဈလြှောကျ အဆိုးရှားဆုံး အခငျြးမြားပွီး ပွသနာတကျခဲ့မှု ၅ ကွိမျနဲ့ ကစားသမား ၅ ဦး
ဆာအဲလကျဈ ဖာဂူဆနျရဲ့ ယူနိုကျတကျ နညျးပွဘဝတဈလြှောကျမှာ သူနဲ့ အဆိုးရှားဆုံး ပွသနာတကျခဲ့တဲ့ ကစားသမား ၅ ဦးနဲ့ အဲဒီအဖွဈအပကျြတှကေို တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။
ဟုတျကဲ့။ ဖာဂူဆနျဟာ ယူနိုကျတကျကို ၂၆ နှဈကွာ တာဝနျယူသှားခဲ့သူပါ။ စကော့တလနျနိုငျငံ ဂလကျကိုမွို့မှာ ၁၉၄၁ ခုနှဈ၊ ဒီဇငျဘာ ၃၁ မှာ မှေးဖှားခဲ့သူမို့ ဒီနှဈ ဒီဇငျဘာ ၃၁ ဆိုရငျ ၇၈ နှဈ ပွညျ့မွောကျခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။ ယူနိုကျတကျရဲ့ အောငျမွငျမှုအရှိဆုံး နညျးပွကွီးတဈဦးဖွဈသလို ဗွိတိနျဘောလုံးလောကသာမက ကမ်ဘာ့ဘောလုံးအသိုငျးအဝနျးကပါ လေးစားခွငျးကို ခံရသူတဈဦးပါ။ ဒါပမေယျ့ ယူနိုကျတကျကို ၂၆ နှဈကွာ ကိုငျတှယျခဲ့တဲ့ ကာလအတှငျးမှာ ဖာဂူဆနျအတှကျ အရာရာဟာ ပနျးခငျးလမျးဖွဈခဲ့တာတော့ မဟုတျပါဘူး။ အဲရဈကနျတိုနာလို၊ ရောနယျဒိုလို ကမ်ဘာ့အဆငျ့ ပါရမီရှငျ ကစားသမားတှသောမက နိုငျငံပေါငျးစုံက ကစားသမားတှေ၊ စိတျဓာတျခံယူခကျြမတူတဲ့ ကစားသမားတှကေို ထိနျးခြုပျခဲ့ရတာပါ။
အရငျခတျေ ဖာဂူဆနျတာဝနျယူခဲ့စဉျက ယူနိုကျတကျမှာ ဘောလုံးနညျးစနဈဒါရိုကျတာဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ အသငျးစီအီးအိုနဲ့ ဖာဂူဆနျတို့ပွီးရငျ ယူနိုကျတကျက ပွီးတာပါပဲ။ ဖာဂူဆနျကလညျး အဝတျလဲခနျး ကစားသမားအခငျြးခငျြး ဆကျဆံရေးကနေ ကစားသမားတဈဦးခငျြးစီရဲ့ ပုဂ်ဂိုလျရေးဆိုငျရာ လူနထေိုငျမှုဘ၀ အခွအေနအေထိ အာရုံစိုကျပွီး လုပျဆောငျပေးခဲ့သူပါ။ ဒါကွောငျ့လညျး ယူနိုကျတကျကို တာဝနျယူခဲ့တဲ့ ၂၆ နှဈအတှငျးမှာ ဖာဂူဆနျနဲ့ အဆငျမပွသေူတှလေညျး ရှိခဲ့ပါတယျ။
ယူနိုကျတကျကို မျောရငျဟိုတာဝနျယူခဲ့ခြိနျမှာ ပေါ့ဘာဦးဆောငျတဲ့ကစားသမားတှနေဲ့ အဆငျမပွဖွေဈလို့ စီအီးအို ဝုဒျဝါဒျက မျောရငျဟိုကို ထုတျလိုကျတဲ့အဖွဈမြိုးကိုတော့ ဖာဂူဆနျတာဝနျယူခဲ့ရခြိနျမှာ အဖွဈခံမှာမဟုတျပါဘူး။ “အသငျးနဲ့ ကလပျ”သညျသာ ပထမလို့ ခံယူထားခဲ့တဲ့ နညျးပွကွီး ဖာဂူဆနျဟာ ဒီစံနှုနျးနဲ့မကိုကျညီတဲ့ အခြိနျတှမှောသာ ကစားသမားတှနေဲ့ ပွသနာတကျခဲ့တာပါ။ နညျးပွကွီး ဖာဂူဆနျ ယူနိုကျတကျကို တာဝနျယူခဲ့တဲ့ကာလတဈလြှောကျ သူနဲ့ အဆိုးရှားဆုံးပွသနာတကျခဲ့တဲ့ ကစားသမား ၅ ဦးကတော့ ဂပျြစတနျး၊ ရှနျးနီ၊ နစ်စတယျရှိုငျး၊ ရှိုငျကိနျးနဲ့ ဒေးဗဈဘကျခမျးတို့ပါပဲ။
ဂပျြစတနျးဟာ ယူနိုကျတကျမှာ ၁၉၉၈ ကနေ ၂၀၀၁ အထိ ၃ နှဈကွာ ကစားခဲ့သူပါ။ ရာသီတိုငျး ပရီးမီးယားလိဂျဖလားရရှိခဲ့သလို အသငျးနဲ့ ပထမဆုံးရာသီမှာပဲ ယူနိုကျတကျရဲ့သမိုငျးဝငျ ၁၉၉၉ ဖလား ၃ လုံးရတဲ့ အောငျမွငျမှုတှကေို ရရှိခဲ့သူပါ။ အရပျအမွငျ့ ၁၉၃ စငျတီမီတာ(၆ပေ ၃ လကျမ) ရှိပွီး ခန်ဓာကိုယျကလညျး ကွံ့ခိုငျ တောငျ့တငျးလှနျးလို့ အဲဒီအခြိနျတှတေုနျးကတော့ စတနျးကို ပရီးမီးယားလိဂျတိုကျစဈမှူးတျောတျောမြားမြား ဖွတျကြျောနိုငျဖို့ ခကျခဲပါတယျ။ တခြို့နညျးပွတှဆေိုရငျ အှနျနရီနဲ့ အခွားတိုကျစဈမှူးတှခေျေါမယျ့အစား စတနျးကို ပိုလိုအပျတယျလို့တောငျ ပွောခဲ့ကွဖူးပါတယျ။ စတနျးဟာ ယူနိုကျတကျကို PSV ကနေ ၁၉၉၈ ခုနှဈမှာ ပေါငျ ၁၀.၆ သနျးနဲ့ ပွောငျးရှလေ့ာခဲ့သူပါ။ အဲဒီခတျေအခါက ဒတျချြကစားသမားတှရေဲ့ စံခြိနျတငျပွောငျးရှကွေ့ေးဖွဈခဲ့ပွီး ကမ်ဘာ့ဈေးအကွီးဆုံး ခံစဈကစားသမားအဖွဈလညျး စံခြိနျတငျခဲ့ပါတယျ။ ယူနိုကျတကျကိုရောကျပွီး ပထမ ၂ ရာသီမှာ အဓိက ကစားသမားဖွဈခဲ့ပမေယျ့ တတိယရာသီအရောကျမှာတော့ အခွအေနတှေေ ပွောငျးသှားခဲ့ပါတယျ။ အဲဒါကတော့ PSV မှာ ကစားနစေဉျအတှငျးမှာပဲ ဖာဂူဆနျက သူ့ကို တောကျလြှောကျ ခဉျြးကပျသှေးဆောငျနခေဲ့တဲ့အကွောငျး စတနျးက သူ့ရဲ့အထ်ထုပတ်တိစာအုပျထဲမှာ ရေးသားဖျောပွခဲ့လို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါဟာ ကစားသမားတဈယောကျအနနေဲ့ သကျဆိုငျရာအသငျးကမသိဘဲ လြှို့ဝှကျ ခဉျြးကပျတဲ့ အဓိပ်ပာယျ သကျရောကျခဲ့ပွီး ဖာဂူဆနျအတှကျလညျး အမြားကွီး သိက်ခာကဆြငျးခဲ့ရပါတယျ။ ယူနိုကျတကျရဲ့ တတိယရာသီမှာတော့ စတနျးဟာ စုစုပေါငျး ၂၃ ပှဲသာ ပှဲထှကျ ကစားခဲ့ရပွီး နောကျရာသီ စတငျခြိနျမှာပဲ ပေါငျ ၁၆ သနျးနဲ့ လာဇီရိုကို ရောငျးခခြံလိုကျရပါတယျ။ စတနျးကို ရောငျးခဲ့ခြိနျမှာ ၂၉ နှဈသာ ရှိသေးပွီး ကစားသမားဘ၀ အကောငျးဆုံးအခြိနျဖွဈလို့ ဖာဂူဆနျနဲ့ စတနျးတို့ပွသနာက ထငျရှားလှနျးခဲ့ပါတယျ။
ဝိနျးရှနျးနီ – (၄)
ယူနိုကျတကျမှာ ၂၀၀၄ ကနေ ၂၀၀၇ အထိ ၁၃ ရာသီအတှငျး ပွိုငျပှဲစုံ ၃၉၃ ပှဲကစားသှားခဲ့တဲ့ ယူနိုကျတကျရဲ့ ဂန်ထဝငျ အင်ျဂလနျတိုကျစဈမှူး ဝိနျးရှနျးနီကလညျး ဖာဂူဆနျနဲ့ ပွသနာတကျခဲ့ဖူးပါတယျ။ ရှနျးနီဟာ ၂၀၀၇-၀၈ ရာသီက ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ ခနျြပီယံလိဂျမှာ ခနျြပီယံဖွဈခဲ့တဲ့အခြိနျက အဓိက ကခြဲ့ပါတယျ။ တဈကှငျးလုံးမှာ မရပျမနား ကွိုးစား ကစားခဲ့တဲ့သူ့ကိုလညျး ယူနိုကျတကျ ပရိသတျတှကေ ခဈြခငျ အားပေးခဲ့ကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ၂၀၁၀ မှာတော့ အခွအေနတှေဟော ပွောငျးလဲကုနျပါတယျ။ ၂၀၁၀ ကမ်ဘာ့ဖလားအပွီးမှာ ရှနျးနီက သကျတမျးတိုးဖို့ လုပျဆောငျခဲ့ပမေယျ့ ယူနိုကျတကျနဲ့အဆငျမပွတေဲ့အတှကျ ခြဲလျဆီးကို ပွောငျးဖို့ ပွငျဆငျနတေယျဆိုတဲ့ သတငျးတှလေညျး ထှကျပျေါခဲ့ပါသေးတယျ။ အဲဒီကာလမှာပဲ ရှနျးနီနဲ့ ဖာဂူဆနျတို့ ပွသနာစတကျလာခဲ့ပါတယျ။ အဲဒါအပွငျ ရှနျးနီက ဂြာမနီကှငျးလယျလူ အိုဇေးလျကို ယူနိုကျတကျကို ချေါစခေငျြတယျလို့ လူသိရှငျကွားထုတျပွောခဲ့ပါသေးတယျ။ အဲဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျလို့ ဖာဂူဆနျက ကစားသမားဝယျရေး၊ မဝယျရေးကိစ်စဟာ ရှနျးနီနဲ့မသကျဆိုငျဘူးလို့ တုံ့ပွနျခဲ့ပါတယျ။ ဝါဒါဘရီမငျကနေ ရီးရဲလျကို အိုဇေးလျပွောငျးသှားခြိနျမှာတော့ ယူနိုကျတကျဟာ ရညျမှနျးခကျြမရှိတဲ့ အသငျးမဟုတျဘူးလို့ ရှနျးနီက ဝဖေနျခဲ့တာကွောငျ့ ခနျြပီယံလိဂျနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျတှကေို ပူပူနှေးနှေးရထားလို့ ယူနိုကျတကျရဲ့ ရညျမှနျးခကျြကို မေးခှနျးထုတျစရာမလိုဘူးလို့ ဖာဂူဆနျက တုံ့ပွနျခဲ့ပါတယျ။ တဈဆကျတညျးမှာပဲ ရှနျးနီရဲ့ယူနိုကျတကျအပျေါ သစ်စာရှိမှုနဲ့ ပရျောဖကျရှငျနယျဆနျမှုကိုလညျး ဖာဂူဆနျက မေးခှနျးထုတျခဲ့ပါသေးတယျ။ အဲဒီအခြိနျကာလတှကေတော့ ရှနျးနီအပျေါ ယူနိုကျတကျနဲ့ ပတျသကျသူတှကေ လေးစားမှုပြောကျဆုံးခဲ့ပွီး ဖာဂူဆနျနဲ့ ရှနျးနီတို့ အကွီးအကယျြ ပွသနာတကျခဲ့ကွတဲ့ ကာလတှပေါ။
လကျရှိအခြိနျမှာတော့ PSV ရဲ့ ယူ-၁၉ အသငျးနညျးပွတာဝနျယူထားတဲ့ အသကျ ၄၃ နှဈရှိ နစ်စတဲလျရှိုငျးဟာ ယူနိုကျတကျမှာ ၂၀၀၁ ကနေ ၂၀၀ ၆ အထိ ၅ နှဈကွာကစားခဲ့သူပါ။ ယူနိုကျတကျအတှကျ ပရီးမီးယားလိဂျ ၁၅၀ ပှဲကစား ၉၅ ဂိုးသှငျးခဲ့ပွီး အဲဒီခတျေအခြိနျက ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ကွောကျစရာအကောငျးဆုံးတိုကျစဈမှူးတဈဦးဖွဈခဲ့ပါတယျ။ နစ်စတဲလျရှိုငျးဟာ ဂိုးရဖို့တဈခုပဲ အတ်တကွီးလှနျးတဲ့ တဈကိုယျကောငျးဆနျ တိုကျစဈမှူးလို့တောငျ တငျစားပွီး ဖာဂူဆနျက ခြီးကြူးခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ၂၀၀၅-၀၆ ရာသီ လိဂျဖလားဗိုလျလုပှဲမှာ အရနျခုံထိုငျခဲ့ရလို့ နစ်စတဲလျရှိုငျးနဲ့ ဖာဂူဆနျတို့ ပွသနာတကျခဲ့ကွပါတယျ။ အဲဒီ ဗိုလျလုပှဲမှာ ပှဲထှကျကစားခှငျ့ပေးဖို့ နစ်စတဲလျရှိုငျးက တောငျးဆိုခဲ့ပမေယျ့ ဖာဂူဆနျက လူးဝဈဆာဟာကိုပဲ ဆကျကစားစခေဲ့ပါတယျ။ ဒီဗိုလျလုပှဲမှာမှ ဆာဟာကိုခနျြထားခဲ့လိုကျရငျ မြှတရာရောကျမှာမဟုတျဘူးလို့ ဖာဂူဆနျက ဆိုခဲ့တာကွောငျ့ နစ်စတဲလျရှိုငျးက ဖာဂူဆနျကို အျောငေါကျခဲ့ရာက ပွသနာတကျခဲ့ပွီး နောကျပိုငျးမှာတော့ နစ်စတဲလျရှိုငျးတဈယောကျလညျး ယူနိုကျတကျမှာ နရောမရခဲ့တော့ပါဘူး။ ဒါ့အပွငျ ယူနိုကျတကျကို ရျောနယျဒိုရောကျလာပွီးနောကျပိုငျးမှာလညျး နစ်စတဲလျရှိုငျးနဲ့ပွသနာတကျခဲ့ပွီး ရျောနယျဒိုဖခငျ သဆေုံးခြိနျမှာ နစ်စတဲလျရှိုငျးရေးခဲ့တဲ့ စာတဈစောငျကွောငျ့ ဖာဂူဆနျကနရောမပေးတော့ဘဲ ဖယျကဉျြခံခဲ့ရတဲ့အထိ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ယူနိုကျတကျမှာ ၁၉၉၃ ကနေ ၂၀၀၅ အထိ ကစားသှားခဲ့တဲ့ အသငျးခေါငျးဆောငျဟောငျး ရှိုငျကိနျးဟာ ယူနိုကျတကျကို တကယျဦးဆောငျနိုငျခဲ့သူပါ။ ဖာဂူဆနျခတျေ ယူနိုကျတကျဟာ Never Say Die ဆိုတဲ့ “သသေညျအထိ ဇှဲမလြှော့”တိုကျပှဲဝငျစိတျရှိတာတှကေို ပွသနိုငျခဲ့တာဟာ ကှငျးထဲမှာ ရှိုငျကိနျးလို အသငျးခေါငျးဆောငျရှိခဲ့လို့ပါ။ အိုငျးရဈရျှသားဖွဈလို့လညျး ပငျကိုယျက စိတျဓာတျမာကြောပွီး ခပျကွမျးကွမျးဆကျဆံတဲ့ ရှိုငျကိနျးဟာ ရာသီကွိုပွငျဆငျမှုမှာတော့ ဖာဂူဆနျရဲ့ လကျထောကျနညျးပွ ကှီးရော့ဇျကို ဝဖေနျခဲ့ပါတယျ။ ကစားသမားတှအေတှကျ လိုအပျတာတှကေို လုပျပေးနိုငျသူမဟုတျဘူးလို့ ဝဖေနျခဲ့တာပါ။ ဒါ့အပွငျ ဂယျရီနဗီးလျအပါအဝငျ ယူနိုကျတကျကစားသမားတှဟော အသငျးရဲ့လကေ့ငျြ့ရေးနညျးစနဈတှနေဲ့ပတျသကျပွီး မပြျောကွဘူးလို့ ထုတျပွောခဲ့ပွနျပါတယျ။ ထို့အတူ မဈဒယျဘရော့ကို ရှုံးခဲ့တဲ့ ပှဲအပွီး ယူနိုကျတကျရုပျသံမှာ ဆိုးရှားလျလို လူငယျကစားသမားတှအေပါအဝငျ ယူနိုကျတကျကစားသမားတခြို့ဟာ စှမျးဆောငျမှုကွောငျ့မဟုတျဘဲ နရောရနတေယျလို့ ပွောလိုကျပွနျပါတယျ။ ဒါဟာ ဖာဂူဆနျကိုပါ သှယျဝိုကျစျောကားတဲ့သဘောရောကျသှားပွီး အဲဒီနောကျပိုငျးက စလို့ ရှိုငျကိနျးဟာ ယူနိုကျတကျမှာ နရေမရတော့ပါဘူး။ ရှိုငျကိနျးရဲ့ မှတျခကျြနဲ့ ဝဖေနျမှုတှဟော အသငျးကို အနုတျပွစတေယျလို့ ဖာဂူဆနျက ခံယူပွီး ၂၀၀၆ မှာတော့ ဆဲလျတဈကို ဖာဂူဆနျက ရောငျးထုတျခဲ့ပါတယျ။
၁၉၉၂ ကနေ ၂၀၀၃ ခုနှဈအထိ ယူနိုကျတကျမှာကစားသှားခဲ့တဲ့ ဒေးဗဈဘကျခမျးကတော့ ယူနိုကျတကျ ဘောလုံးသမိုငျးတဈလြှောကျ ပရိသတျအခဈြဆုံး ကစားသမားလို့တောငျ သုံးသပျခံရနိုငျပါတယျ။ ရီးရဲလျ၊ ဂလကျဆီ၊ အစေီမီလနျ၊ ပီအကျဈဂြီတို့မှာ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ဘကျခမျးဟာ ယူနိုကျတကျကစားသမားဘဝမှာတော့ အထှနျးတောကျဆုံးဖွဈခဲ့ပါတယျ။ သူ့ရဲ့ ပွဈဒဏျဘောကနျခကျြတှနေဲ့ ကြော့ရှငျးတဲ့ ရုပျရှငျသှငျပွငျကလညျး ဘောလုံးစိတျမဝငျစားတဲ့ တဈကမ်ဘာလုံးက မိနျးမပြိုလေးတှကေိုတောငျမှ ပြိုတိုငျးကွိုကျတဲ့ နှငျးဆီခိုငျဖွဈစနေိုငျခဲ့ပါတယျ။ ယူနိုကျတကျမှာ ကစားနစေဉျ ပွဈဒဏျဘောကနျခကျြတှကေို သူ့ဘာသူ အပိုထပျဆောငျး လကေ့ငျြ့ခဲ့တာ၊ ကွိုးစားအားထုတျလှနျးတာတှကေ ဖာဂူဆနျအကွိုကျဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဒေးဗဈဘကျခမျးနဲ့ လကျရှိ ဇနီးသညျ ဗဈတိုးရီးယားတို့ လကျထပျပွီးတဲ့နောကျမှာတော့ အခွအေနတှေေ ပွောငျးလဲကုနျပါတယျ။ ဗဈတိုးရီးယားဟာ ဖကျရှငျဒီဇိုငျနာဖွဈသလို ခငျပှနျးဖွဈသူတို့လညျး လှလှပပ ကြော့ကြော့ရှငျးရှငျးနဲ့ စမတျကအြောငျ ပွငျဆငျပေးပါတယျ။ ဒီလိုလုပျတာဟာ အလှမျးပိုလှနျးတယျလို့ ဖာဂူဆနျက ယူဆပါတယျ။ နောကျပွီး ရိုးသားကွိုးစားတဲ့ ကစားသမားလေးအဖွဈကနေ ဟနျထုတျပွီး မျောဒယျလိုလိုဖွဈသှားတဲ့ ပုံစံကိုလညျး ဖာဂူဆနျက ဒေါသထှကျခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၀၃ ဖဖေျောဝါရီ ၁၅ မှာတော့ ယူနိုကျတကျက အာဆငျနယျကို အကျဖျအပှေဲမှာ ရှုံးသှားခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီပှဲမှာပေးလိုကျရတဲ့ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ့ပတျသကျပွီး ဒေးဗဈဘကျခမျးက လိုကျလံဖကျြထုတျခွငျးမရှိဘဲ ကွှကွှရှရှလေး ပွေးနတေယျလို့ ဖာဂူဆနျက ယူဆခဲ့ပါတယျ။ အဝတျလဲခနျးအတှငျးမှာတော့ ဖာဂူဆနျရဲ့ ဒေါသတှဟော ဘကျခမျးအပျေါစုပွုံပေါကျကှဲခဲ့ပွီး ဘောလုံးကနျဖိနပျနဲ့ ဘကျခမျးကိုပဈပေါကျခဲ့ရာမှာ ဘကျခမျးမကျြခုံးကှဲသှားခဲ့ကာ ခြုပျရတဲ့အထိ ဖွဈသှားခဲ့ပါတယျ။ ဒါဟာ ကစားသမားတဈဦးအပျေါ လိုတာထကျပိုတဲ့ ကိုယျထိလကျရောကျမှုဖွဈခဲ့ပွီး ဖာဂူဆနျထှကျရနိုငျတယျလို့လညျး သုံးသပျခဲ့ကွပါတယျ။ ကစားဒိုငျတှကေဆိုရငျ ယူနိုကျတကျကနေ အရငျထှကျရမယျ့သူဟာ ဒေးဗဈဘကျခမျးလား? ဖာဂူဆနျလား?လို့တောငျ ကွေးတှေ ဖှငျ့ခဲ့ကွပါတယျ။ အဲဒီပွသနာနဲ့အတူ ဖာဂူဆနျကိုလညျး ဝဖေနျမှုတှရှေိခဲ့သလို ဘကျခမျးလညျး ယူနိုကျတကျမှာ နရော မရတော့ပါဘူး။ ၂၀၀၃ ခုနှဈမှာတော့ ဘကျခမျးကို ရီးရဲလျကို ရောငျးလိုကျပွီး ဖာဂူဆနျက ယူနိုကျတကျမှာပဲ ဆကျရှိနခေဲ့ပါတယျ။ ဘကျခမျးဟာ ရီးရဲလျမှာလညျး အောငျမွငျမှုရခဲ့ပွီး ၂၀၀၃ နဲ့ ၂၀၀၄ ခုနှဈတှမှော Google မှာ ရှာဖှမှေုအခံရဆုံး စာလုံးအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါတယျ။ ယူနိုကျတကျက ဘကျခမျးကိုရောငျးလိုကျတာဟာ အခြိနျစောလှနျးတယျလို့လညျး ယူဆခဲ့ကွပွီး ဖာဂူဆနျရဲ့နညျးပွဘဝတဈလြှောကျ ဘကျခမျးဟာ အဆိုးရှားဆုံး ပွသနာတကျခဲ့တဲ့ ကစားသမားအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါတယျ။
ဖာဂူဆန်ရဲ့ မန်ယူနည်းပြဘ၀တစ်လျှောက် အဆိုးရွားဆုံး အချင်းများပြီး ပြသနာတက်ခဲ့မှု ၅ ကြိမ်နဲ့ ကစားသမား ၅ ဦး
ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန်ရဲ့ ယူနိုက်တက် နည်းပြဘ၀တစ်လျှောက်မှာ သူနဲ့ အဆိုးရွားဆုံး ပြသနာတက်ခဲ့တဲ့ ကစားသမား ၅ ဦးနဲ့ အဲဒီအဖြစ်အပျက်တွေကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့။ ဖာဂူဆန်ဟာ ယူနိုက်တက်ကို ၂၆ နှစ်ကြာ တာဝန်ယူသွားခဲ့သူပါ။ စကော့တလန်နိုင်ငံ ဂလက်ကိုမြို့မှာ ၁၉၄၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ မှာ မွေးဖွားခဲ့သူမို့ ဒီနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ဆိုရင် ၇၈ နှစ် ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ရဲ့ အောင်မြင်မှုအရှိဆုံး နည်းပြကြီးတစ်ဦးဖြစ်သလို ဗြိတိန်ဘောလုံးလောကသာမက ကမ္ဘာ့ ဘောလုံးအသိုင်းအ၀န်းကပါ လေးစားခြင်းကို ခံရသူတစ်ဦးပါ။ ဒါပေမယ့် ယူနိုက်တက်ကို ၂၆ နှစ်ကြာ ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ ကာလအတွင်းမှာ ဖာဂူဆန်အတွက် အရာရာဟာ ပန်းခင်းလမ်းဖြစ်ခဲ့တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲရစ်ကန်တိုနာလို၊ ရောနယ်ဒိုလို ကမ္ဘာ့ အဆင့် ပါရမီရှင် ကစားသမားတွေသာမက နိုင်ငံပေါင်းစုံက ကစားသမားတွေ၊ စိတ်ဓာတ်ခံယူချက်မတူတဲ့ ကစားသမားတွေကို ထိန်းချုပ်ခဲ့ရတာပါ။
အရင်ခေတ် ဖာဂူဆန်တာဝန်ယူခဲ့စဉ်က ယူနိုက်တက်မှာ ဘောလုံးနည်းစနစ်ဒါရိုက်တာဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ အသင်းစီအီးအိုနဲ့ ဖာဂူဆန်တို့ပြီးရင် ယူနိုက်တက်က ပြီးတာပါပဲ။ ဖာဂူဆန်ကလည်း အ၀တ်လဲခန်း ကစားသမားအချင်းချင်း ဆက်ဆံရေးကနေ ကစားသမားတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ လူနေထိုင်မှုဘ၀ အခြေအနေအထိ အာရုံစိုက်ပြီး လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သူပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ယူနိုက်တက်ကို တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ ၂၆ နှစ်အတွင်းမှာ ဖာဂူဆန်နဲ့ အဆင်မပြေသူတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်ကို မော်ရင်ဟိုတာဝန်ယူခဲ့ချိန်မှာ ပေါ့ဘာဦးဆောင်တဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်လို့ စီအီးအို ၀ုဒ်ဝါဒ်က မော်ရင်ဟိုကို ထုတ်လိုက်တဲ့အဖြစ်မျိုးကိုတော့ ဖာဂူဆန်တာဝန်ယူခဲ့ရချိန်မှာ အဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ “အသင်းနဲ့ ကလပ်”သည်သာ ပထမလို့ ခံယူထားခဲ့တဲ့ နည်းပြကြီး ဖာဂူဆန်ဟာ ဒီစံနှုန်းနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ အချိန်တွေမှာသာ ကစားသမားတွေနဲ့ ပြသနာတက်ခဲ့တာပါ။ နည်းပြကြီး ဖာဂူဆန် ယူနိုက်တက်ကို တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက် သူနဲ့ အဆိုးရွားဆုံးပြသနာတက်ခဲ့တဲ့ ကစားသမား ၅ ဦးကတော့ ဂျပ်စတန်း၊ ရွန်းနီ၊ နစ္စတယ်ရွိုင်း၊ ရွိုင်ကိန်းနဲ့ ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းတို့ပါပဲ။
ဂျပ်စတန်းဟာ ယူနိုက်တက်မှာ ၁၉၉၈ ကနေ ၂၀၀၁ အထိ ၃ နှစ်ကြာ ကစားခဲ့သူပါ။ ရာသီတိုင်း ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားရရှိခဲ့သလို အသင်းနဲ့ ပထမဆုံးရာသီမှာပဲ ယူနိုက်တက်ရဲ့သမိုင်းဝင် ၁၉၉၉ ဖလား ၃ လုံးရတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိခဲ့သူပါ။ အရပ်အမြင့် ၁၉၃ စင်တီမီတာ(၆ပေ ၃ လက်မ) ရှိပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း ကြံ့ခိုင် တောင့်တင်းလွန်းလို့ အဲဒီအချိန်တွေတုန်းကတော့ စတန်းကို ပရီးမီးယားလိဂ်တိုက်စစ်မှူးတော်တော်များများ ဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ တချို့နည်းပြတွေဆိုရင် အွန်နရီနဲ့ အခြားတိုက်စစ်မှူးတွေခေါ်မယ့်အစား စတန်းကို ပိုလိုအပ်တယ်လို့တောင် ပြောခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ စတန်းဟာ ယူနိုက်တက်ကို PSV ကနေ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာ ပေါင် ၁၀.၆ သန်းနဲ့ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူပါ။ အဲဒီခေတ်အခါက ဒတ်ခ်ျကစားသမားတွေရဲ့ စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးဖြစ်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ ဈေးအကြီးဆုံး ခံစစ်ကစားသမားအဖြစ်လည်း စံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ကိုရောက်ပြီး ပထမ ၂ ရာသီမှာ အဓိက ကစားသမားဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် တတိယရာသီအရောက်မှာတော့ အခြေအနေတွေ ပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ PSV မှာ ကစားနေစဉ်အတွင်းမှာပဲ ဖာဂူဆန်က သူ့ကို တောက်လျှောက် ချဉ်းကပ်သွေးဆောင်နေခဲ့တဲ့အကြောင်း စတန်းက သူ့ရဲ့အထ္ထုပတ္တိစာအုပ်ထဲမှာ ရေးသားဖော်ပြခဲ့လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကစားသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာအသင်းကမသိဘဲ လျှို့ဝှက် ချဉ်းကပ်တဲ့ အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဖာဂူဆန်အတွက်လည်း အများကြီး သိက္ခာကျဆင်းခဲ့ရပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ရဲ့ တတိယရာသီမှာတော့ စတန်းဟာ စုစုပေါင်း ၂၃ ပွဲသာ ပွဲထွက် ကစားခဲ့ရပြီး နောက်ရာသီ စတင်ချိန်မှာပဲ ပေါင် ၁၆ သန်းနဲ့ လာဇီရိုကို ရောင်းချခံလိုက်ရပါတယ်။ စတန်းကို ရောင်းခဲ့ချိန်မှာ ၂၉ နှစ်သာ ရှိသေးပြီး ကစားသမားဘ၀ အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်လို့ ဖာဂူဆန်နဲ့ စတန်းတို့ပြသနာက ထင်ရှားလွန်းခဲ့ပါတယ်။
၀ိန်းရွန်းနီ – (၄)
ယူနိုက်တက်မှာ ၂၀၀၄ ကနေ ၂၀၀၇ အထိ ၁၃ ရာသီအတွင်း ပြိုင်ပွဲစုံ ၃၉၃ ပွဲကစားသွားခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက်ရဲ့ ဂန္ထ၀င် အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှူး ၀ိန်းရွန်းနီကလည်း ဖာဂူဆန်နဲ့ ပြသနာတက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ရွန်းနီဟာ ၂၀၀၇-၀၈ ရာသီက ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်က အဓိက ကျခဲ့ပါတယ်။ တစ်ကွင်းလုံးမှာ မရပ်မနား ကြိုးစား ကစားခဲ့တဲ့သူ့ကိုလည်း ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေက ချစ်ခင် အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၁၀ မှာတော့ အခြေအနေတွေဟာ ပြောင်းလဲကုန်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ ဖလားအပြီးမှာ ရွန်းနီက သက်တမ်းတိုးဖို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့် ယူနိုက်တက်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့အတွက် ချဲလ်ဆီးကို ပြောင်းဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေလည်း ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒီကာလမှာပဲ ရွန်းနီနဲ့ ဖာဂူဆန်တို့ ပြသနာစတက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါအပြင် ရွန်းနီက ဂျာမနီကွင်းလယ်လူ အိုဇေးလ်ကို ယူနိုက်တက်ကို ခေါ်စေချင်တယ်လို့ လူသိရှင်ကြားထုတ်ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ဖာဂူဆန်က ကစားသမားဝယ်ရေး၊ မ၀ယ်ရေးကိစ္စဟာ ရွန်းနီနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ၀ါဒါဘရီမင်ကနေ ရီးရဲလ်ကို အိုဇေးလ်ပြောင်းသွားချိန်မှာတော့ ယူနိုက်တက်ဟာ ရည်မှန်းချက်မရှိတဲ့ အသင်းမဟုတ်ဘူးလို့ ရွန်းနီက ဝေဖန်ခဲ့တာကြောင့် ချန်ပီယံလိဂ်နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်တွေကို ပူပူနွေးနွေးရထားလို့ ယူနိုက်တက်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို မေးခွန်းထုတ်စရာမလိုဘူးလို့ ဖာဂူဆန်က တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ရွန်းနီရဲ့ယူနိုက်တက်အပေါ် သစ္စာရှိမှုနဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်မှုကိုလည်း ဖာဂူဆန်က မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒီအချိန်ကာလတွေကတော့ ရွန်းနီအပေါ် ယူနိုက်တက်နဲ့ ပတ်သက်သူတွေက လေးစားမှုပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီး ဖာဂူဆန်နဲ့ ရွန်းနီတို့ အကြီးအကျယ် ပြသနာတက်ခဲ့ကြတဲ့ ကာလတွေပါ။
လက်ရှိအချိန်မှာတော့ PSV ရဲ့ ယူ-၁၉ အသင်းနည်းပြတာဝန်ယူထားတဲ့ အသက် ၄၃ နှစ်ရှိ နစ္စတဲလ်ရွိုင်းဟာ ယူနိုက်တက်မှာ ၂၀၀၁ ကနေ ၂၀၀ ၆ အထိ ၅ နှစ်ကြာကစားခဲ့သူပါ။ ယူနိုက်တက်အတွက် ပရီးမီးယားလိဂ် ၁၅၀ ပွဲကစား ၉၅ ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီး အဲဒီခေတ်အချိန်က ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နစ္စတဲလ်ရွိုင်းဟာ ဂိုးရဖို့တစ်ခုပဲ အတ္တကြီးလွန်းတဲ့ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန် တိုက်စစ်မှူးလို့တောင် တင်စားပြီး ဖာဂူဆန်က ချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀၀၅-၀၆ ရာသီ လိဂ်ဖလားဗိုလ်လုပွဲမှာ အရန်ခုံထိုင်ခဲ့ရလို့ နစ္စတဲလ်ရွိုင်းနဲ့ ဖာဂူဆန်တို့ ပြသနာတက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီ ဗိုလ်လုပွဲမှာ ပွဲထွက်ကစားခွင့်ပေးဖို့ နစ္စတဲလ်ရွိုင်းက တောင်းဆိုခဲ့ပေမယ့် ဖာဂူဆန်က လူးဝစ်ဆာဟာကိုပဲ ဆက်ကစားစေခဲ့ပါတယ်။ ဒီဗိုလ်လုပွဲမှာမှ ဆာဟာကိုချန်ထားခဲ့လိုက်ရင် မျှတရာရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ဖာဂူဆန်က ဆိုခဲ့တာကြောင့် နစ္စတဲလ်ရွိုင်းက ဖာဂူဆန်ကို အော်ငေါက်ခဲ့ရာက ပြသနာတက်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ နစ္စတဲလ်ရွိုင်းတစ်ယောက်လည်း ယူနိုက်တက်မှာ နေရာမရခဲ့တော့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ယူနိုက်တက်ကို ရော်နယ်ဒိုရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်း နစ္စတဲလ်ရွိုင်းနဲ့ပြသနာတက်ခဲ့ပြီး ရော်နယ်ဒိုဖခင် သေဆုံးချိန်မှာ နစ္စတဲလ်ရွိုင်းရေးခဲ့တဲ့ စာတစ်စောင်ကြောင့် ဖာဂူဆန်ကနေရာမပေးတော့ဘဲ ဖယ်ကျဉ်ခံခဲ့ရတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်မှာ ၁၉၉၃ ကနေ ၂၀၀၅ အထိ ကစားသွားခဲ့တဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်း ရွိုင်ကိန်းဟာ ယူနိုက်တက်ကို တကယ်ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့သူပါ။ ဖာဂူဆန်ခေတ် ယူနိုက်တက်ဟာ Never Say Die ဆိုတဲ့ “သေသည်အထိ ဇွဲမလျှော့”တိုက်ပွဲဝင်စိတ်ရှိတာတွေကို ပြသနိုင်ခဲ့တာဟာ ကွင်းထဲမှာ ရွိုင်ကိန်းလို အသင်းခေါင်းဆောင်ရှိခဲ့လို့ပါ။ အိုင်းရစ်ရ်ှသားဖြစ်လို့လည်း ပင်ကိုယ်က စိတ်ဓာတ်မာကျောပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆက်ဆံတဲ့ ရွိုင်ကိန်းဟာ ရာသီကြိုပြင်ဆင်မှုမှာတော့ ဖာဂူဆန်ရဲ့ လက်ထောက်နည်းပြ ကွီးရော့ဇ်ကို ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ ကစားသမားတွေအတွက် လိုအပ်တာတွေကို လုပ်ပေးနိုင်သူမဟုတ်ဘူးလို့ ဝေဖန်ခဲ့တာပါ။ ဒါ့အပြင် ဂယ်ရီနဗီးလ်အပါအ၀င် ယူနိုက်တက်ကစားသမားတွေဟာ အသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ရေးနည်းစနစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မပျော်ကြဘူးလို့ ထုတ်ပြောခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ထို့အတူ မစ်ဒယ်ဘရော့ကို ရှုံးခဲ့တဲ့ ပွဲအပြီး ယူနိုက်တက်ရုပ်သံမှာ ဆိုးရှားလ်လို လူငယ်ကစားသမားတွေအပါအ၀င် ယူနိုက်တက်ကစားသမားတချို့ဟာ စွမ်းဆောင်မှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲ နေရာရနေတယ်လို့ ပြောလိုက်ပြန်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဖာဂူဆန်ကိုပါ သွယ်ဝိုက်စော်ကားတဲ့သဘောရောက်သွားပြီး အဲဒီနောက်ပိုင်းက စလို့ ရွိုင်ကိန်းဟာ ယူနိုက်တက်မှာ နေရမရတော့ပါဘူး။ ရွိုင်ကိန်းရဲ့ မှတ်ချက်နဲ့ ဝေဖန်မှုတွေဟာ အသင်းကို အနုတ်ပြစေတယ်လို့ ဖာဂူဆန်က ခံယူပြီး ၂၀၀၆ မှာတော့ ဆဲလ်တစ်ကို ဖာဂူဆန်က ရောင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၉၂ ကနေ ၂၀၀၃ ခုနှစ်အထိ ယူနိုက်တက်မှာကစားသွားခဲ့တဲ့ ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းကတော့ ယူနိုက်တက် ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက် ပရိသတ်အချစ်ဆုံး ကစားသမားလို့တောင် သုံးသပ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ ရီးရဲလ်၊ ဂလက်ဆီ၊ အေစီမီလန်၊ ပီအက်စ်ဂျီတို့မှာ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ဘက်ခမ်းဟာ ယူနိုက်တက်ကစားသမားဘ၀မှာတော့ အထွန်းတောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပြစ်ဒဏ်ဘောကန်ချက်တွေနဲ့ ကျော့ရှင်းတဲ့ ရုပ်ရှင်သွင်ပြင်ကလည်း ဘောလုံးစိတ်မ၀င်စားတဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက မိန်းမပျိုလေးတွေကိုတောင်မှ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်ဖြစ်စေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်မှာ ကစားနေစဉ် ပြစ်ဒဏ်ဘောကန်ချက်တွေကို သူ့ဘာသူ အပိုထပ်ဆောင်း လေ့ကျင့်ခဲ့တာ၊ ကြိုးစားအားထုတ်လွန်းတာတွေက ဖာဂူဆန်အကြိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းနဲ့ လက်ရှိ ဇနီးသည် ဗစ်တိုးရီးယားတို့ လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အခြေအနေတွေ ပြောင်းလဲကုန်ပါတယ်။ ဗစ်တိုးရီးယားဟာ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာဖြစ်သလို ခင်ပွန်းဖြစ်သူတို့လည်း လှလှပပ ကျော့ကျော့ရှင်းရှင်းနဲ့ စမတ်ကျအောင် ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်တာဟာ အလွမ်းပိုလွန်းတယ်လို့ ဖာဂူဆန်က ယူဆပါတယ်။ နောက်ပြီး ရိုးသားကြိုးစားတဲ့ ကစားသမားလေးအဖြစ်ကနေ ဟန်ထုတ်ပြီး မော်ဒယ်လိုလိုဖြစ်သွားတဲ့ ပုံစံကိုလည်း ဖာဂူဆန်က ဒေါသထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ မှာတော့ ယူနိုက်တက်က အာဆင်နယ်ကို အက်ဖ်အေပွဲမှာ ရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပွဲမှာပေးလိုက်ရတဲ့ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းက လိုက်လံဖျက်ထုတ်ခြင်းမရှိဘဲ ကြွကြွရွရွလေး ပြေးနေတယ်လို့ ဖာဂူဆန်က ယူဆခဲ့ပါတယ်။ အ၀တ်လဲခန်းအတွင်းမှာတော့ ဖာဂူဆန်ရဲ့ ဒေါသတွေဟာ ဘက်ခမ်းအပေါ်စုပြုံပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး ဘောလုံးကန်ဖိနပ်နဲ့ ဘက်ခမ်းကိုပစ်ပေါက်ခဲ့ရာမှာ ဘက်ခမ်းမျက်ခုံးကွဲသွားခဲ့ကာ ချုပ်ရတဲ့အထိ ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ကစားသမားတစ်ဦးအပေါ် လိုတာထက်ပိုတဲ့ ကိုယ်ထိလက်ရောက်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီး ဖာဂူဆန်ထွက်ရနိုင်တယ်လို့လည်း သုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကစားဒိုင်တွေကဆိုရင် ယူနိုက်တက်ကနေ အရင်ထွက်ရမယ့်သူဟာ ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းလား? ဖာဂူဆန်လား?လို့တောင် ကြေးတွေ ဖွင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီပြသနာနဲ့အတူ ဖာဂူဆန်ကိုလည်း ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့သလို ဘက်ခမ်းလည်း ယူနိုက်တက်မှာ နေရာ မရတော့ပါဘူး။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာတော့ ဘက်ခမ်းကို ရီးရဲလ်ကို ရောင်းလိုက်ပြီး ဖာဂူဆန်က ယူနိုက်တက်မှာပဲ ဆက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဘက်ခမ်းဟာ ရီးရဲလ်မှာလည်း အောင်မြင်မှုရခဲ့ပြီး ၂၀၀၃ နဲ့ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွေမှာ Google မှာ ရှာဖွေမှုအခံရဆုံး စာလုံးအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်က ဘက်ခမ်းကိုရောင်းလိုက်တာဟာ အချိန်စောလွန်းတယ်လို့လည်း ယူဆခဲ့ကြပြီး ဖာဂူဆန်ရဲ့နည်းပြဘ၀တစ်လျှောက် ဘက်ခမ်းဟာ အဆိုးရွားဆုံး ပြသနာတက်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။
လှပတဲ့ကိုယျခန်ဓာအယိမျးအနှဲ့နဲ့ သပျရပျတဲ့အဆုံးသတျမှုတှေ ပေါငျးစပျထားတဲ့ ဘရနျ့ဒျရဲ့သှငျးဂိုး လူမှုမီဒီယာမှာ ဟိုးလေးတကြျောဖွဈနေ